Iindaba - Iindidi kunye nokusebenza kweebhotile zeglasi
Iibhotile zeglasi zisetyenziselwa ukupakishwa kweemveliso kukutya, iwayini, isiselo, amayeza kunye namanye amashishini. Iibhotile zeglasi kunye neenkonkxa zinozinzo lweekhemikhali kwaye azosuleli ngaphakathi. Zikhuselekile ukuba zisetyenziswe ngenxa yokuxinana komoya kunye nokumelana nobushushu obuphezulu. inokuthenjwa. Ibhotile yeglasi yelabhotile yokupakisha yesiselo selizwe lam, iglasi ikwaluhlobo lwezinto zokupakisha ezinembali ende. Ngobuninzi bezinto zokupakisha ezithela emarikeni, izikhongozeli zegilasi zisesikhundla esibalulekileyo ekupakisheni isiselo, esingenakwahlulwa kwiimpawu zokupakisha ezingazukubekwa ezinye izinto zokupakisha.
Kwiminyaka yakutshanje, ibango lasekhaya leebhotile zeglasi kunye neenkonkxa ziye zaqhubeka ukwanda, kodwa iimfuno zomgangatho wemveliso (Character) kunye nobungakanani (Umgangatho) zikwenyuka kwaye zanda. Sihlelisise ubume beebhotile zeglasi kunye neenkonkxa zokuziqhelanisa nezinto ezahlukeneyo Ngokupakishwa kwemveliso eyahlukeneyo, inqanaba lemveliso kunye nexabiso elongeziweyo liphuculwe, isabelo sentengiso sandisiwe, kunye nokhuphiswano kushishino lwebhotile yeglasi yelizwe lam kwimarike iphela ziphuculwe.
Zininzi iintlobo zeebhotile zeglasi kunye neenkonkxa, ezihlelwe zangqukuva, ezembhoxo, ezesikwere, eziziingxande, nezicaba ngokobume bazo. Phakathi kwazo, uninzi zijikelezile. Ngokobungakanani bomlomo webhotile, kukho umlomo obanzi, umlomo omncinci wokutshiza umlomo, njl., Ngokwendlela yokubumba, kukho iibhotile ezibunjiweyo kunye neebhotile zolawulo. Ngokokuhlelwa kombala, akukho mibala kwaye imibala. Olu luhlu lungasentla alungqini. Ngamanye amaxesha uhlobo olufanayo lwebhotile lunokuhlelwa lube ziindidi ezininzi, kwaye ngophuhliso lomsebenzi kunye nokusetyenziswa kweebhotile zeglasi kunye neenkonkxa, iindidi ziya kukhula imihla ngemihla.
Ukupakishwa kweebhotile zeglasi ezinyangayo kunxulumene ngokusondeleyo neebhotile zeglasi zonyango. Kukho iintlobo ezimbini ngokubanzi zokupakishwa kweebhotile zeglasi. Enye kukupakisha okuqhelekileyo kwiibhokisi ezitshixwayo, kwaye enye bubushushu kusetyenziswa iPV okanye ifilimu ye-PE. Shwabanisa ukupakisha, kunye nenani elincinci lokupakisha iipallet. Ibhotile yeglasi yelabhotile yokupakisha yesiselo selizwe lam, iglasi ikwaluhlobo lwezinto zokupakisha ezinembali ende. Ngobuninzi bezinto zokupakisha ezithela emarikeni, izikhongozeli zegilasi zisesikhundla esibalulekileyo ekupakisheni isiselo, esingenakwahlulwa kwiimpawu zokupakisha ezingazukubekwa ezinye izinto zokupakisha. Ukusuka kwimbono yokhuseleko lwemveliso kunye nococeko, umgangatho wobushushu obunciphisa ukupakisha kunye nokupakishwa kwepallet kuphezulu kakhulu kunepakethe yeebhokisi eziqhelekileyo. Ngoku sele ikwenzile ukuba yifilimu ye-PE enqatshelwe bubushushu kwaye ibekwe ebhokisini, icocekile kwaye isempilweni, kwaye inokupakishwa njengoyinyumba (ukungunda). Eli ikwalikhombiso lophuhliso lwebhotile yeglasi yezonyango.
Iimfuno ezingqongqo zokhuselo lokusingqongileyo zenza uxinzelelo lweebhotile zeglasi ukuba ziphakame kakhulu. Iibhotile zeglasi, abavelisi beebhotile abanamava, kunye neemveliso zeglasi zinamava kuyilo kunye nokuthengiswa kweebhotile zeglasi ezahlukeneyo (ukuThengisa) Ngenxa yokuba iibhotile zeglasi kunye neenkonkxa zicacile kwaye zizinzile ngekhemikhali (Ingcaciso: izinzile kwaye izinzile; Akukho tshintsho) Ukusebenza kakuhle, ixabiso eliphantsi Ukubonakala okuhle, ukuvelisa ngokulula (ukuvelisa) ukuveliswa, kunokuphinda kusetyenziswe kwakhona amaxesha amaninzi, njl., nangona kunjalo kukhuphiswano lwezinye izinto zokupakisha (ukhuphiswano), abavelisi beebhotile zeglasi basenezinye izinto eziluncedo. Ibhotile yeglasi yelabhotile yokupakisha yesiselo selizwe lam, iglasi ikwaluhlobo lwezinto zokupakisha ezinembali ende. Ngobuninzi bezinto zokupakisha ezithela emarikeni, izikhongozeli zegilasi zisesikhundla esibalulekileyo ekupakisheni isiselo, esingenakwahlulwa kwiimpawu zokupakisha ezingazukubekwa ezinye izinto zokupakisha.
Kwiminyaka yakutshanje, kunye nemfuno ekhulayo yabathengi yokuqhutywa ngokunzulu kweemveliso zeebhotile zeglasi (iMveliso), ukuprinta kwesilika kunye neentyatyambo zokubhaka kumphezulu wezikhongozeli zeglasi sele zixhaphakile, kunye nomgangatho kunye neemfuno zokukhusela okusingqongileyo kushicilelo lwesilika, ii-inki zokuprinta ipeyinti kunye nepeyinti ekhaya nakumazwe aphesheya Kuya kusomelela, kubeka uxinzelelo kwiinkampani ezininzi ezisebenza ngebhotile.
I-Buddhism yaziswa e-China ivela kwi-Han Dynasty, kwaye yaphuhla kwaye yaphumelela ngexesha le-Wei ne-Jin Dynasties. Igolide, isilivere, i-amber, i-coral, ilitye lamatye, i-glaze enemibala kunye ne-agate zidweliswe njengobuncwane ezisixhenxe zobuBuddha. Ukongeza, utata kaCao Cao kunye nonyana wakhe bakhuthaza ukungcwatywa okubhityileyo, njengokufa kukaCao Cao Cao Cao, "bahlangana kunye nexesha, akukho golide kunye nobuncwane bejade", ukuze inkqubo yokungcwaba ijeyidi eyasekwa kwiHan Dynasty ngaphezulu Iminyaka engama-400 yafa, kwaye iiperile ezingavulwanga kunye nezinye izinto nazo zawa kabukhali. Iibhotile zeglasi ezibonakalayo zazisetyenziselwa ukunxiba izinto zabangasekhoyo njengeminikelo yamaBuddha, kwaye inani elikhulu leentsimbi zeglasi lenziwa ukuhombisa imifanekiso eqingqiweyo kunye neetempile zikaBuddha, ezazibonisa ukuphuhliswa kwetekhnoloji yeglasi ngelo xesha.